Fitaovana fitaovana | Tantsaha anaty aterneto | January 2020
Sokajy Fitaovana fitaovana
Fametrahana hazo fako hazo ao amin'ny firenena, toro-hevitra sy tricks
Alohan'ny hanaovana trano fonenana amin'ny tananao, dia mila manapa-kevitra amin'ny inona ianao izay mila izany. Hitombo fotsiny ny zana-ketsa amin'ny zoron-trano kely, tianao ve ny miditra ao amin'ny fitomboany manontolo, na ny manangana horonam-baravaron'ny sarimihetsika, ary manitsy ny hafanana ao amin'ny trano fonenana. Angamba ianao manontany tena fotsiny hoe ahoana no fomba hanaovana ny trano fonenana mahazatra.
Maro ny mpikaroka zaridaina sy zaridaina, izay nampiasaina teo aloha, siramamy na zana-tany, tamin'ny endrika fitaovam-piadiana, tamin'ny farany, tamin'ny alàlan'ny fiompiana. Ny fitaovana fandrakofana dia ampiasain'ny orinasa lehibe mpamboly, fa koa amin'ny toeram-piompiana madinika. Ankehitriny dia hianatra momba ny inona ny agrofiber, miresaka momba ny fampiasana azy, ary mandinika ihany koa ny votoatin'ny asa.
Ahoana ny fomba fampiasana ny fitaovana fitrandrahana "Agrotex"
Mpamboly matihanina sy mpamboly mpamboly dia manana tanjona iray - hitombo ny vokatra ary hiaro azy amin'ny toetrandro mahery vaika, aretina ary bibikely. Androany dia mora kokoa ny manao izany noho ny teo aloha, raha mampiasa fitaovana tsara momba ny fitaovana - Agrotex. Famaritana sy ny fananana ara-materialy Ny fitaovana fandrakofam-peo "Agrotex" dia akofoka tsy misy volon'ondry, fofona sy hazavana, novokarin'ny teknolojia spunbond.
Inona ny lutrasil?
Matetika, rehefa mamboly voa, dia ilaina ny manolotra fepetra fitsaboana ho an'ny vokatra samihafa. Mba hiarovana ny zana-ketsa amin'ny rivotra, ny hatsiaka ary ny zavatra hafa ivelany, ampiasao fitaovana manokana ho an'ny fialofana. Ao amin'ny lahatsoratry ny lahatsoratra dia hilazanay ny lutrasil, lazao aminareo hoe inona izany ary ahoana no fampiasana izany.
Copyright 2020 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fitaovana fitaovana